Archive du 20180719
Guy Rivo Randrianarisoa « Miala eto ireo vahiny tsy vonona hanara-dalàna »
Tonga nitaraina tamin’ny minisitry ny indostria, Guy Rivo Randrianarisoa, tetsy amin’ny biraony etsy Anosy omaly ireo mpiasa eo anivon’ny orinasa afaka haba noho ny olana manjo azy ireo.
Andry Rajoelina Manomboka manana olana
Tsikaritra ho miady irery ihany i Andry Rajoelina. Ireo minisitra sahirana ao anaty governemanta, tratran’ny tsindry samihafa ihany koa, ka tsy maintsy miasa sy mila mitandro ny firaisankinan’ny governemanta, tsy afaka firy manampy azy.
Hery Rajaonarimampianina Diso kajy hatrany am-boalohany
Ho sarotra ny miandry izay ho filoham-pirenena handimby an-dRajaonarimampianina eo ary raha tsy manana paikady sy fomba fiasa haingana sy mahomby, dia tsy hisy zava-banona ao anatin’ny 5 taona.
Vovonana miaro ny demokrasia « Tsy vonona hanao fifidianana ny HVM. »
Vovonana vaovao indray no tafatsangana tetsy Antsakaviro omaly hanohitra ny sakantsakana rehetra tsy hahatongavana amin’ny fifidianana.
Fifidianana Filoham-pirenena Hiverina ny tantaran’ny 2002
Atahorana ny hiverenan’ny toe-draharaham-pifidianana ho toy ny tamin’ny 2002 noho ny mety ho fanatsimbadihana voka-pifidianana.
Praiminisitra Ntsay Christian Tena tsy hitanila tokoa ve ?
Tsy ampy 2 volana akory izao no nanendren’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina an’i Christian Ntsay ho praiminisitra vaovao.
Olan’ny firenena Mitaky famerenan-kasina
Fifanandrifian-javatra ve sa efa nifanarahana fa nanomboka omaly dia saika naneho hevitra avokoa indray ireo mpivoy ny maha zava-dehibe ny famerenana ny hasin’ny firenena sy ny soatoavina Malagasy.
Fanirisoa Ernaivo Kandida filoha ihany koa ?
Mangataka an-dRtoa Fanirisoa Ernaivo hirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena amin’ny fifidianana ho avy izao ny Antoko ZAnak’i MAdagasikara (ZAMA),
Mamy Raharimanana, kandidan’ny antoko MAEVA Nidina ifotony nijery ireo maharary ny vahoaka teny Andravoahangy
Nidina ifotony teny amin’ny tsenan’Andravoahangy omaly alarobia ny kandidan’ny antoko MAdagasikara Endrika VAnona ( MAEVA) tarihin’ny kandida Maminirina Raharimanana.
Tabera Randriamanantsoa Tsy nanaiky ny tsy ara-dalàna mihitsy tamin’ny tetezamita
Minisitra tsy nanaiky ny tsy fanarahan-dalàna mihitsy tamin’ny andron’ny tetezamita 2009-2013 notarihan’Atoa Andry Rajoelina Atoa Tabera Randriamanantsoa filohan’ny antoko Kintana.
Miarahaba anao am-panajana be aho ry Jean ! Aza dia zatra ny lalan-dririnina ho aho ianao ! Mba miteny ihany aho. Aiza kosa ry Jean no dia ny fomba fanaonareo tamin’ny 20 taona lasa ihany ve no mbola ho ampiharina mandrak’ankehitriny ee ?
Fanakatonana ny sekoly Saint Vincent de Paul Tsy miova intsony ny fanapahan-kevitra
Tsy misy hidiran’ireo maintimolaly ny resaka raharaha sekoly Saint Vincent de Paul Ambatonilita.
Maitre Olala Vonona hifampitady amin’ny holafitry ny mpisolovava
Nampanantsoin’ny avy eo anivon’ny holafitry ny mpisolovava eto Madagasikara teny Anosy omaly ny mpisolovava Willy Razafinjatovo fantatry ny rehetra amin’ny hoe Olala.
SAMIFIN feno 10 taona Mbola maro ny asa miandry
Omaly alarobia 18 jolay no nomarihina tetsy amin’ny Golden’s Building SEIMAD 67ha ny fankalazana ny faha-10 taona niorenan’ny Sampandraharaha Malagasy Iadiana amin’ny famotsiam-bola sy famatsiam-bolan’ny fampihorohoroana (SAMIFIN).
Kitram-behivavy dingana faha-2 andro faha-5 Lavon’ny Askam tamin’ny “tirs au but” nyAsot sy Askam omaly
Lavon’ny Askam Itasy tamin’ny “tirs au but” 4-3 omaly alarobia 18 jolay, teny Carion, teo amin’ny andro faha-5 amin’ny dingana faha-2 ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2018 amin’ny baolina kitra vehivavy.
Thb Champions League Malagasy Montsan’ny Ajesaia Bongolava 11-0 ny Fils d’Elephant Anosy
Niavaka indray omaly alarobia 18 jolay teo amin’ireo vokatry ny lalao baolina kitra fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2018,
Tournoi Foot à 11 Ftmtk Ekar Ambohimasina Lasan’ny Lycée Privée La Source ny amboara
Tontosa tao amin’ny EKAR Ambohimasina Betafo ny alahady 15 jolay 2018 teo ny lalao famaranana baolina kitra « Tournoi Foot à 11 » sokajy vehivavy nokarakarain’ny Tanora ao amin’ny FTMTK EKAR DISTRIKA Ambohimasina.
Maha te hanao fahagagana !
Raha azo natao ny niteny fotsiny hoe « foa foa milamina » dia efa afaka mampilamina ny zava-drehetra eto amin’ny firenena dia natao. Maha te hanao fahagagana ny toe-draharaha iainantsika ankehitriny.
Tsenan’Andravoahangy Mbola betsaka ireo olana sedrain’ny mpivarotra
Mbola betsaka ireo olana sedrain’ireo mpivarotra eny amin’ny tsenan’ Andravoahangy amin’izao. Ho an’ireo mpivarotra miisa 1.600 mivelona amin’ny fivarotana « confection » ao ambadiky ny CSB II dia nambaran’ny delegen’ny tsena Atoa Germain Razafimandimbiarivony fa ny fanariana ny fako no mbola tena olan’izy ireo.
Hery ara-toekarena Nosongonan’i Inde i Frantsa
Nihemotra faha fito i Frantsa ary lasa laharana fahenina i Inde araka ny tatitry ny Banky iraisam-pirenena tamin’ny 11 jolay farany teo.